Mahdi Guuleed oo weerar ku qaaday guddoomiyaha aqalka sare | Warkii.com
Home warkii Mahdi Guuleed oo weerar ku qaaday guddoomiyaha aqalka sare
Mahdi Guuleed oo weerar ku qaaday guddoomiyaha aqalka sare
Ra’iisul wasaare ku xigeenka dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) oo wareysi gaar ah siiyey Horufadhi Media TV ayaa weerar afka ku qaaday guddoomiyaha golaha aqalka sare, Mudane Cabdi Xaashi Cabdullahi.
Mahdi Guuleed ayaa wareysigan ku sheegay in guddoomiyaha aqalka sare uu haatan u muuqdo hoggaamiye mucaarad ku ah dowladda Soomaaliya, sida uu hadalka u dhigay.
Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in sanadihii u dambeeyey uu soo saarayey qoraallo is-daba joog ah oo uu uga soo horjeedo shaqada socota & doorashada 2020/2021.
“Dhowrkii sano ee u dambeeysay sida aad Warbaahinta kala socoteen guddoomiye Cabdi Xaashi waxaa uu soo saarayay qoraalo isdab-joog ah,wuxuu u muuqdaa in uu yahay hoggaamiye mucaarad ah,” ayuu yiri Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar).
Ra’iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya oo hadalkiisa sii wata ayaa ku eedeeyey Cabdi Xaashi inuu hoos u dhigay golaha sharci dajinta, isaga oo hoosta ka xariiqay in muddo fog aysan kulmin, islamarkaana ay baaqdeen shirar muhiim ahaa.
“Wuxuu sidoo kale hoos u dhigay golihii Sharci dejinta oo muddo ma aysan kulmin oo qeylo-dhaantooda waad ogeyd, shirarkii loo baahnaa ma dhicin,” ayuu sii raaciyey.
Hadalkan ayaa ku soo aadaya, iyada oo haatan xukuumadda Soomaaliya iyo guddoomiyaha aqalka sare ay isku hayaan dhismaha guddiyada doorashooyinka, gaar ahaan xubnaha gobollada waqooyi ku metalaya guddiga doorashada ee heer federaal.
Previous articleKulan xasaasi ah oo Muqdisho uga socdo Safiirka Qadar iyo Ugaaska Beesha Xawaadle
Next articleMaleeshiyaad hubeysan oo dil & dhaawac haween ugu geystay Galgaduud
Dib u dhac ku yimid jadwalkii lagu heshiiyey ee doorashada
Dad badan oo ku dhintay qaraxii is-miidaaminta ahaa ee ka dhacay...